Midowga Murashaxiinta oo sideed qodob kasoo saaray xiisadda dalka ka taagan - Caasimada Online
Home Warar Midowga Murashaxiinta oo sideed qodob kasoo saaray xiisadda dalka ka taagan
Midowga Murashaxiinta oo sideed qodob kasoo saaray xiisadda dalka ka taagan
Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Midowga Murashaxiinta Soomaaliya ayaa sideed qodob kasoo saaray xaaladda xasaasiga ah ee dalka ka taagan ee ka dhalatay isku dayga madaxweyne Farmaajo uu ku hor-istaagay inay caddaalad helaan Ikraan Tahliil Faarax iyo qoyskeeda. Hoos ka aqriso qoraalka Golaha
Golaha Midowga Musharaxiinta (Council of Presidential Candidates)
Tix: GMMM/32/21 Tr: 10/09/21
Kulan deg-deg ah oo ay isugu yimaadeen Golaha Midowga Murashixiinta iyo wadatashiyo badan oo ay sameeyeen ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 10/09/21 ku soo gebagaboobay magaalaa Muqdisho. Kulanka iyo wadatashiyadaba waxaa looga dooday layskuna weydaarsaday afkaar ku wajahan xaaladda dalka, gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee khalkhalka siyaasadeed geliyey dalka.
Waxaa laysla gartay qodobada soo socda:
1. Goluhu wuxuu si buuxda u garab taagan yahay Raysal-wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo mas’uuliyada amniga iyo doorashooyinka meel fagaare ah kula wareegay, kadib markii Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday uu ku fashilmay qabashada doorashooyin daahfuran, xor iyo xalaal ah, oo waqtigeeda ku dhacda.
4. Goluhu wuxuu la socdaa dhaqdhaqaaqa uu gudoomiyihi hore ee Golaha Shacabka, Maxamad Mursal Abdirahman uu ku doonayo dib-u-soo noolaynta Golihi Shacabka ee muddo-xileedkiisu dhamaaday, iyadoo la doonayo in lagu carqaladeeyo daddaalka Raysal-wasaaraha, laguna hor istaagayo caddaalad u raadinta Ikraan Tahliil iyo Qoyskeeda.
5. Goluhu wuxuu xusuusinayaa Maxamad Mursal in uu hore ugu fashilmay mu’aamaraadkaas, dalkana halis u geliyey colaad-sokeeye kadib markii uu meelmariyey mudda-kororsigii labada sano ahaa ee uu dalbaday Madaxweynaha mudda-xileedkiisu dhamaaday.
6. Goluhu wuxuu uga dhigayaa guddoomiye-hore Mursal in uu mar kale dalka geliyo colaad-sokeeye, wuxuuna Goluhu ka waaninayaa in uu dib uga istaago shirqoolada lagu cargaladaynayo hawlaha Dastuuriga ah ee horyaalla Raysal-wasaaraha .
8. Goluhu wuxuu bogaadinayaa Madaxweynaha Dowlad-gobaleedka Hirshabelle, Mudane Cali Guudlaawe Xuseen on fursad siman siiyey liiska tartamayaasha doonaya kuraasta Aqalka Sare oo ah sida saxa ah oo doorashooyinka loo agaasimo, waxaana u rajaynaynaa in ay doorashooyinkaas si daahfuraan ah ku soo dhamaystirmaan.